स्वास्थ्य बीमा : बीमा गराउन प्रतिनिधी नै आउँदैनन्
२०७४ असोज २६ बिहिबार गते ०८:५२ मा प्रकाशित
संसदले मंगलबार स्वास्थ्य बीमा ऐन स्वीकृत गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्पmत उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले ऐन बनेको हो । ऐन बन्नुअघि देखि नै स्वास्थ्य बीमा १८ वटा जिल्लामा शुरु भइसकेको छ । त्यो मध्ये इलाम पनि पहिलो चरणमै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको जिल्ला हो ।
इलाममा दुईवर्ष अघि नै यो कार्यक्रम शुरु भएपनि नागरिकले यसको सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम राम्रो लागेर आफु बीमा चर्न चाहने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्योपचार गर्न चाहने नागरिकले बीमा नै गराउन पाएका छैनन् । कार्यक्रमका अनुसार घरघरमा गएर बीमा गराउने प्रतिनिधीले बीमा गराईदिने ब्यवस्था छ । तर, त्यस्तो सेवा इलामका नागरिकले पाएकै छैनन् ।
आपूmले बीमा गराउन चाहने नागरिकले कार्यक्रमको कार्यालयमै फोन गरेर आफु बीमा गर्न चाहेकोले कसरी बीमा गराउने ? कार्यालयमै आउने कि ? भनेर जिज्ञासा राख्दा घरघरमै प्रतिनिधी आउने भनेर उत्तर दिने गरेपनि त्यस्ता नागरिकका घरमा बीमा गराउने प्रतिनिधी नआएको गुनासो आउने गरेको छ । अरु त अरु इलामको सदरमुकाम इलाम नगरपालिकाको मुटुमै रहेको हालको इलाम नपा ७ भित्रै पनि नागरिकले चाहेरसमेत बीमा गराउन सकेका छैनन् ।
इलाम नपा ७ का एक नागरिकका अनुसार गएको सात महिनादेखि उनले पटकपटक बीमा कार्यक्रमको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर बीमा गर्न चाहेको बताएपनि बीमा गर्न पाएका छैनन् । ‘सधैँ घरमै पठाइदिन्छु, आइहाल्छन् भन्ने कुरा हुन्छ । आउने होइनन् । के होला र बीमा’, उनले भने ।
इलाम नपा ९ का अर्का एक नागरिकको पनि गुनासो त्यही थियो । घरघरमा प्रतिनिधी आउँछन्, प्रत्येक वडामा दुई जनाको दरले प्रतिनिधी राखिएको छ भनेर गफ दिएपनि महिनौँसम्म नआएको उनले बताए । उनले निराश हुँदै भने, ‘हुन त यो पनि सरकारी काम नै होला । निजी बीमा कम्पनीलाई भनेको भए उहिल्यै भइसक्थ्यो । सरकारको काम जहिल्यै ढिलासुस्ती हुन्छ । यो पाराले जनतालाई दिने भनेको सेवा कहिले पाइएला ?’
सदरमुकामभित्र त बीमा गर्ने प्रतिनिधी पुग्दैनन् भने गाउँको अवस्था के होला ? यस विषयमा सन्दकपुर दैनिकबाट बीमा कार्यक्रमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा नागरिकलाई दिने जवाफ जस्तै जवाफ आएको छ । त्यहाँका कर्मचारी खेम अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सम्पर्क गर्नेको घरमै हामीले प्रतिनिधी पठाउने गरेका छौँ ।’ प्रतिनिधी खोइ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले छक्क परेको आभाष दिँदै भने, ‘ए हो र अस्ति नै भयो होला भन्ने लागेको थियो । म आजै पठाइदिन्छु ।’
अधिकारीका अनुसार पहिले राखेका प्रतिनिधीले काम नगरेपछि जनशक्ति अभावकै कारण समयमा बीमा गराउन नागरिकको घरघरमा पुग्न नसकिएको हो । उनले भने, ‘पहिलेका प्रतिनिधीमध्ये कसैले छाडे, कसैले काम नै गरेनन् । अहिले प्रत्येक वडामा कम्तिमा एकएक जना पर्नेगरि प्रतिनिधी राखि तालिम दिइँदैछ । त्यसपछि घरघरमै पुगेर बीमा
सरकारले ल्याएको बीमा कार्यक्रम भएपनि बीमा गराउन नपाउँदा धेरै इलामेली नागरिकले भने आपूmसँग रकम नहुँदा पनि उपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ ।